Tamarta baddu waxay kaloo dhalisaa tamar la cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Tamarta biyaha badda, Tamarta Wave, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Xaqiiqdii badaha waxay leeyihiin awood aad u weyn oo ay ku soo saaro tamar. Nasiib darrose, tan looma adeegsado sababo kala duwan awgood.
Tamarta badda ama tamarta badaha ayaa ah asal ahaan kala duwanSida hirarka, mawjadaha, mawjadaha badda, kuleylka kuleylka iyo kuwa cusbada.
Waxaan u kala qaybin karnaa dhowr kooxood, sida rakibidda dabaysha oo ku taal badda, iyo sidoo kale adeegsiga biomass-ka badda, in kasta oo ujeeddooyinka boostadan loo adeegsanayo. wuxuu noqon doonaa dhinacyada maadaama aysan ahayn kuwo si sax ah u adeegsada miisaska biyaha milixdu ku badan tahay.
1 Noocyada tamarta badda
1.1 Tamarta hirarka
1.2 Tamarta daadka
1.3 Badaha badda
1.4 Wejiga cusbada
2 Sidee looga faa'iideystaa tamartaan
Noocyada tamarta badda
Sidoo kale guud ahaan loo yaqaan "mootada mawjadaha“Waa midka hadda ugu horumarsan, iyo tiknoolajiyada kala duwan ee la soo saaray waxay muujinayaan xiisaha weyn ee ay u qabaan waaxda tamarta la cusboonaysiin karo.
Tamarta Mowjadaha waxaa lagu qeexaa sida tamarta badda ee laga helo soo qabashada tamarta firfircoonida ee ku jirta dhaqdhaqaaqa biyaha badda iyo badaha.
Hirarku waa natiijada ka dhalata dabaysha dusha sare ee biyaha. Dabeyshani waxay ka soo bilaabataa tamarta ugu weyn ee meeraha laga galo: tamarta qorraxda ka timaadda. Tamarta ku jirta dhaqdhaqaaqa oscillatory-ka ee biyaha badda waa weyn. Meelo gaar ah oo dhaqdhaqaaqa mawjadu ku badan yahay, tamarta firfircoon ee ku keydsan dhaqdhaqaaqan ayaa ka badan 70MW / km2.
Sidoo kale loo yaqaan "qulqulaya"Tamartaasi ma waxay ka faa'iideysaneysaa kor u kaca iyo hoos u dhaca biyaha badda ee ay soo saaraan waxqabadka culeyska qorraxda iyo dayaxa koronto si nadiif ah u dhal. Sidaa darteed, waa il dib loo cusboonaysiin karo oo aan la koobi karin oo adeegsada tamarta qulqulka ee laga soo saaro baddeena.
Xaaladdan oo kale, cilladda ugu weyni waa meesha ay ku kala duwan yihiin dhererka dhererkoodu waa weyn yahay sidaa darteed faa'iido noqo dhinaca dhaqaalaha marka laga eego in lagu shaqeeyo xarun.
ka Badaha badda Kuwani waa ifafaalooyinka ka dhaca miisaanka badda dhexdeeda iyadoo ay sabab u tahay adeegsiga firfircoonida biyaha ee ka imanaya meelaha qoto dheer.
Asalka waxaa sidoo kale laga helaa ficilka dabaysha ee jirka biyaha, kaasoo hoos udhaca xoogiisa sida qoto dheer.
Ku saabsan gradients, hadda waxaa jira laba qaab oo looga faa’iideysto tamartooda.
Dhinaca kale, farqiga u dhexeeya heerkulka u dhexeeya cufnaanta biyaha dusha iyo tan qoto dheer, oo farsamo ahaan looga fulin karo meelahaas oo ku yaal dhul-baraha ama meelaha kulaylaha ah, gaar ahaan sii socoshada heerkulka sanadka oo dhan.
Weelka cusbada leh waxaa loo isticmaali karaa oo keliya meelaha ay isugu yimaadaan noocyada biyaha leh cusbada kaladuwan. Tani guud ahaan waxay ka dhacdaa afka webiyada.
Sidee looga faa'iideystaa tamartaan
Haddii aan diiradda saarno adeegsiga ilaha tamarta badda, kuwaas oo ku dhow adduunka oo dhan.
Waa tamarta mowjadaha oo horumarsan, in kasta oo taasi macnaheedu ahayn in tamarta qulqulka Looma isticmaalin si muhiim ah sanado, laakiin kaliya meelaha qaarkood oo ay jiraan xaalado aad u qaas ah, maaddaama isticmaalkeeda lala xiriirinayo saameyn deegaanka ah oo sareysa, waana goobo leh qiime deegaan oo aad u sarreeya.
Meelaha leh kheyraadka hadda jira ee badda, dhibaatadu waxay noqon kartaa mid kale, waana tan weyn cufnaanta taraafikada badda oo la heli karo goobahan, in kasta oo leh qoto dheer aagga, dhibaatadu way yaraan kartaa.
Isticmaalka wejiyada badda, hadda, faa'iido ma leh. In kastoo, aysan ahayn sababtaas awgeed waxay joojisay baaritaanka.
Yurub waxay ahayd gobol horseed ka ah isticmaalka hirarka, gaar ahaan gobolka Scotland y Portugal, inkasta oo markii dambe dalal kale lagu daray, oo ay ka mid yihiin Espana, inta badan ismaamulada xeebta Cantabrian, iyo sidoo kale Galicia.
Waxaa jira mashaariic badan oo la bilaabay ilaa maanta, oo leh natiijooyin kala duwan, laakiin taageerada xoogan ee maamulada kala duwan ee horumarinta waaxdan. Sidoo kale waxaa jira daneyn weyn oo laga qabo warshadaha waaweyn ee dib loo cusboonaysiin karo, taas oo horudhac u ah guusha muddada dhexe, iyadoo lagu kalsoonaan karo hal tamar oo la cusboonaysiin karo oo ku jirta isku darka korantada dalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Wave » Tamarta baddu waxay kaloo dhalisaa tamar la cusboonaysiin karo
Dhismayaasha Eber, kuwa ugu tamarta badan